हसन अलीले फ्याँके सबैभन्दा तीव्र गतिको बल ! (हेर्नुहोस् भिडियोसहित) » बुद्ध भूमि नेपाल
टिम आबुधाबीको अर्को शानदार जित, यस्तो बन्यो अंक तालिका
टिम अबुधाबीले दियो वारियर्सलाई विशाल लक्ष्य, लिभिङ्स्टोनले गरे छक्काको वर्षा
हसन अलीले फ्याँके सबैभन्दा तीव्र गतिको बल ! (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
काठमाडौंः बंगलादेश र पाकिस्तानबीचको टी–२० सिरिजको पहिलो खेल शुक्रबार ढाकामा सम्पन्न भएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले ७ विकेट गुमाएर १२७ रन बनाएको थियो।
जवाफमा पाकिस्तानले ४ बल बाँकी रहँदै ६ विकेटमा १३२ रन बनाएर खेल जित्दै तीन खेलको शृङ्खलामा १–० को अग्रता लिएको छ। यस खेलका नायक हसन अली थिए। उनले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै ३ विकेट लिएर ‘म्यान अफ द म्याच’ बने। तर, यसै क्रममा उनले आफ्नो फास्ट बलिङको बारेमा ट्विटरमा ट्रेन्डिङ गर्न थाले।
अली इनिङ्सको दोस्रो ओभर गर्दै थिए, उनले पहिलो बलमा महत्वपूर्ण विकेट लिए तर त्यसपछि उनले अर्को बल अफ स्टम्पबाहिर बल दिए, जुन विकेटकिपरमा गएर ब्याटिङलाई घण्टौंमा देखाइएको थियो।
यो बलको गति कति थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन तर स्पिडोमिटरले यसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छिटो बल भएको देखाउँछ। जसमा उनले २ सय १९ किलोमिटर प्रति घन्टाको गतिमा बल फ्याँकेको देखाएके छ। यो स्पिड गनमा टेक्नोलोजीको कमीको कारण भएको हो। जसका कारण अली सोशल मिडियामा ट्रेन्ड गर्न थालेका छन्।
हालै विश्वकपको सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा उनले निर्णायक क्षणमा म्याथ्यु वेडको क्याच छाडेका थिए। त्यसपछि म्याथ्यु वेडले लगातार तीन छक्का प्रहार गर्दै अस्ट्रेलियालाई फाइनलमा पुर्याए।
अलीको खराब फिल्डिङका कारण पाकिस्तानको यात्रा रोकियो। यसपछि अली सामाजिक सञ्जालमा धेरै ट्रोल भए। यद्यपि, पाकिस्तान र विश्वभरका पूर्व खेलाडीहरूले हसन अलीको बचाउ गर्दै प्रशंसकहरूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे।
बंगलादेशविरुद्धको ‘म्यान अफ द म्याच’को उपाधि जितेर उनले यो अवार्ड पाकिस्तानी फ्यानलाई समर्पण गरेका छन्। जसको भिडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको छ।
Hassan Ali Fastest Bowl ever
Break the record of Shoaib Akhtar
219 Kph ….. 136 mph 😱#BANvPAK pic.twitter.com/liut3w2fBG
— Chaudhary Awais (@Awais_786_) November 19, 2021
Take this Hasan Ali haters. pic.twitter.com/03FDFQFB1U
— Dennis (@DennisCricket_) November 19, 2021
४ मंसिर २०७८, शनिबार २१:४८
४ मंसिर २०७८, शनिबार २०:५३
चेन्नईविरुद्ध ग्लाडियटर्सको शानदार जित, मोरिस र रसेलद्वारा छक्काको वर्षा
४ मंसिर २०७८, शनिबार २०:०६
४ मंसिर २०७८, शनिबार २०:५२